Izingcingo ezinkulu ezenziwa nge-sipgate.io > UVielhuber David
Izingcingo ezinkulu ezenziwa nge-sipgate.io03
ISipgate idale i-API yamafu ethokozisayo ene-sipgate.io , lapho inamathuba amaningi ezungeze ucingo lwe-Intanethi. I-akhawunti ayikhokhelwa, futhi kunenketho yokusetha noma iyiphi inombolo yomthumeli wamahhala ku-Isici Sesitolo mahhala. Imibhalo evela ku-sipgate.io isanwebeka, kepha ngokufunda okuncane ku- Sipgate API esemthethweni ungazibona ngokushesha izinto ezijabulisayo.
Kwikhodi elandelayo sibona le ndlela yokuziphatha elandelayo: Ngezinhloso zokuhlola sibiza izinombolo zocingo eziyishumi nambili ngokulandelana ukuze sidlale ifayela lokulalelwayo bese silibuyisela futhi.
Isandiso se-PHP XML-RPC kufanele sifakwe. Izingcingo manje sezenziwe - ukuze kudlalwe ifayela lokulalelwayo, sifaka i-URL yokuqalisa ku-Sipgate backend yezingcingo eziphumayo (uma sizibiza thina) kanye nezingcingo ezingenayo (uma othile engashayela emuva) bese wenza kusebenze ukulungisa iphutha -Log:
Manje silungiselela ifayela lokulalelwayo (ngokuya ngemibhalo okufanele litholakale njengefayela le-mono 16bit PCM WAV). Ukwenza lokhu, siphonsa i-ffmpeg ukuguqula ifayela le-MP3 libe yifomethi oyifunayo:
Manje silayisha leli fayela le-WAV kanye nombhalo olandelayo weXML ku- https://www.tld.com/sipgate:/
Uma ufuna ukwehluka amafayela alalelwayo, kuyalulekwa ukuthi usebenzise igama lefayela elisha (umsindo-v * .wav) ngaso sonke isikhathi ngezizathu zesikhashana.
Izingcingo ezifanayo zingenzeka (ngokwesitatimende esisemthethweni esivela kwaSipgate kunomkhawulo wokuxhumeka okungama-5 ngasikhathi sinye, kepha ngikwazile ukusungula okuningi), lapha kufanele ulungise okuthile ngenani lokulala.